लूका ८ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
८ यसको केही समयपछि उहाँ परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको प्रचार र घोषणा गर्दै सहर-सहर अनि गाउँ-गाउँ डुल्न थाल्नुभयो। अनि बाह्रै जना उहाँसित थिए। २ उहाँसित केही स्त्रीहरू पनि थिए, जसबाट उहाँले दुष्ट स्वर्गदूतहरू धपाउनुभएको थियो अनि जसका रोगबिमारहरू उहाँले निको पार्नुभएको थियो। तिनीहरूमध्ये मग्दलिनी भनिने मरियम पनि थिइन्‌, जसबाट सात वटा दुष्ट स्वर्गदूत निकालिएको थियो। ३ साथै, हेरोदको घरको रेखदेख गर्ने नाइके चूजाकी पत्नी योअन्ना, सुसन्ना अनि अरू थुप्रै स्त्री पनि थिए। यिनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति खर्चेर येशू अनि उहाँका चेलाहरूको सेवा गरिरहेका थिए। ४ तब उहाँसँगै एकपछि अर्को सहरमा जाने मानिसहरूबाहेक एउटा ठूलो भीड पनि जम्मा भएपछि उहाँले एउटा दृष्टान्त चलाएर तिनीहरूसित कुरा गर्नुभयो: ५ “एक जना बीउ छर्ने मानिस बीउ छर्नलाई निस्क्यो। छर्दै जाँदा तीमध्ये केही बाटोको छेउछाउमा परे र ती कुल्चिइए अनि आकाशका चराहरू आएर खाइदिए। ६ अरूचाहिं चट्टानमा परे, जहाँ त्यति ओस नभएकोले टुसाउनेबित्तिकै ती सुकिहाले। ७ अझ अरूचाहिं काँडाहरूको बीचमा परे अनि सँगसँगै बढेका काँडाहरूले गर्दा ती निसास्सिए। ८ अरू केही भने असल माटोमा परे अनि टुसाएपछि सय गुणा फल फलाए।” यी कुरा भन्दाभन्दै उहाँले ठूलो स्वरले यसो पनि भन्नुभयो: “जसको सुन्ने कान छ, त्यसले सुनोस्।” ९ तर उहाँका चेलाहरूले यस दृष्टान्तको अर्थ के होला भनेर सोध्न थाले। १० उहाँले भन्नुभयो: “तिमीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको पवित्र रहस्य बुझ्ने मौका दिइएको छ तर बाँकी अरूहरूका लागि त यो दृष्टान्त मात्रै हुनेछ, ताकि हेरेर पनि तिनीहरूले नदेखून्‌ अनि सुनेर पनि तिनीहरूले अर्थ नबुझून्‌। ११ दृष्टान्तको अर्थ यो हो: बीउ परमेश्वरको वचन हो। १२ बाटोको छेउछाउमा परेकाहरू ती हुन्‌, जसले वचन सुन्छन्‌ तर त्यसपछि दियाबल आउँछ र तिनीहरूले विश्वास गरेर उद्धार नपाऊन्‌ भनेर तिनीहरूको मनबाट त्यो वचन खोसेर लैजान्छ। १३ चट्टानमा पर्नेहरू ती हुन्‌, जसले वचन सुन्नेबित्तिकै खुसीसाथ स्वीकार्छन्‌ तर तिनीहरूको जरा हुँदैन। त्यसैले केही समयसम्म त विश्वास गर्छन्‌ तर परीक्षा आइपर्नेबित्तिकै पछि हटिहाल्छन्‌। १४ काँडाहरूको बीचमा पर्ने ती हुन्‌, जसले वचन सुन्छन्‌ तर यस जीवनको फिक्री, धनसम्पत्ति अनि मोजमज्जाले गर्दा भड्किन्छन्‌, जसले गर्दा तिनीहरू पूरै निसासिन्छन्‌ र तिनीहरूको फल पाक्न पाउँदैन। १५ असल जमिनमा पर्नेचाहिं असल मन भएका ती मानिसहरू हुन्‌, जसले वचन सुनेपछि त्यसलाई मनमा राखिराख्छन्‌ र धीरजी भई फल फलाउँछन्‌। १६ “कसैले दियो बालेर त्यसलाई भाँडाले छोप्दैन वा खाटमुनि राख्दैन तर भित्र पस्ने सबैले उज्यालो देखून्‌ भनेर त्यसलाई पानसमाथि राख्छ। १७ लुकाइएको यस्तो कुनै कुरा छैन, जो प्रकट नहोस् अनि होसियारीपूर्वक छिपाइएको यस्तो कुनै कुरा छैन, जो थाह नहोस् र कहिल्यै पर्दाफास नहोस्। १८ त्यसैले तिमीहरू कसरी सुन्छौ, ध्यान देओ। किनकि जससित छ, त्यसलाई अझ धेरै दिइनेछ। तर जससित छैन, त्यसले आफूसित जति छ भनी सोचेको छ, त्योसमेत त्यसबाट खोसिनेछ।” १९ तब येशूका आमा र भाइहरू उहाँ भएको ठाउँमा आए तर भीडले गर्दा उहाँ नजिक पुग्न भने सकिरहेका थिएनन्‌। २० अनि कसैले उहाँलाई भन्यो: “तपाईंका आमा र भाइहरू तपाईंलाई भेट्न बाहिर पर्खिरहेका छन्‌।” २१ तर उहाँले तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो: “यिनीहरू नै मेरा आमा र भाइहरू हुन्‌, जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन्‌ र पालन गर्छन्‌।” २२ एक दिनको कुरा हो, उहाँ आफ्ना चेलाहरूसित डुङ्गा चढ्नुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “आओ, हामी तालपारि जाऔं।” त्यसैले उहाँहरू डुङ्गा चढेर जानुभयो। २३ तर यात्रा गर्दै गर्दा उहाँ निदाउनुभयो। तब तालमा ठूलो तुफान चल्यो अनि डुङ्गा पानीले भरिन थाल्यो। यसले गर्दा तिनीहरूको ज्यान खतरामा पऱ्यो। २४ केही नलागेपछि तिनीहरू उहाँकहाँ गए र उहाँलाई ब्यूँझाउँदै यसो भने: “गुरुज्यू, गुरुज्यू, हामी मर्नै आँट्यौं!” तब उठेर उहाँले बतासलाई र पानीको छाललाई हप्काउनुभयो अनि ती थामिए र पूरै शान्त भए। २५ तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “खै, तिमीहरूको विश्वास?” तर तिनीहरू असाध्यै डराए र अचम्म मान्दै आपसमा यसो भन्न थाले: “यिनी साँच्चै को हुन्‌, किनकि बतास र समुद्रले समेत यिनले आज्ञा गर्दा मान्दा रहेछन्‌?” २६ अनि उहाँहरू गालीलपारि गेरासिनीको इलाकामा किनारा लाग्नुभयो। २७ उहाँ पाखामा ओर्लिनेबित्तिकै, सहरको एक जना मानिससित उहाँको भेट भयो। यस मानिसमा दुष्ट स्वर्गदूतहरू बास गरेको थियो र उसले लुगा नलगाएको निकै समय भइसकेको थियो अनि ऊ घरमा होइन, चिहानहरूमा बस्थ्यो। २८ येशूलाई देख्नेबित्तिकै ऊ ठूलो स्वरले चिच्यायो र उहाँसामु घोप्टो पर्दै ठूलो स्वरले यसो भन्यो: “हे सर्वोच्च परमेश्वरको छोरा येशू, तपाईंको मसित के सरोकार?* बिन्ती छ, मलाई नसताउनुहोस्।” २९ (किनभने उहाँले त्यस दुष्ट स्वर्गदूतलाई त्यस मानिसबाट निस्केर आउन हुकुम गरिहनुभएको थियो। त्यसले उसलाई आफ्नो काबूमा राखेको निकै समय भइसकेको थियो। उसलाई पटक-पटक नेल र साङ्लाले बाँध्नुका साथै पहरा पनि दिएर राखिएको थियो। तर उसले ती बन्धनहरू तोड्थ्यो अनि दुष्ट स्वर्गदूतले उसलाई एकलास ठाउँहरूतिर लैजान्थ्यो।) ३० येशूले उसलाई सोध्नुभयो: “तेरो नाम के हो?” उसले जवाफ दियो: “पल्टन,” किनभने थुप्रै दुष्ट स्वर्गदूत ऊभित्र बास गरिरहेका थिए। ३१ अनि तिनीहरूले आफूहरूलाई अगाध खाडलमा जाने हुकुम नगर्न उहाँलाई बिन्ती गर्न लागे। ३२ त्यतिखेर सुँगुरहरूको ठूलो बथान त्यही पहाडमा चरिरहेको थियो। त्यसैले तिनीहरूले आफूहरूलाई ती सुँगुरहरूभित्र पस्ने अनुमति दिन उहाँलाई बिन्ती गरे। अनि उहाँले तिनीहरूलाई अनुमति दिनुभयो। ३३ तब ती दुष्ट स्वर्गदूतहरू त्यस मानिसबाट बाहिर निस्केर सुँगुरहरूभित्र पसे अनि बथान भीरतिर हुत्तिंदै गयो र तालमा खसेर डुब्यो। ३४ यो देखेर गोठालाहरू भागे अनि सहर र गाउँमा पसेर यसबारे सबैलाई सुनाए। ३५ तब के भएको रहेछ भनी हेर्न मानिसहरू आए। तिनीहरू येशूकहाँ पुगे अनि दुष्ट स्वर्गदूतहरूले छोडेको त्यस मानिसलाई लुगा लगाएको र सद्दे भएर येशूको पाउनिर बसिरहेको पाए। यो सब देखेर तिनीहरू डराए। ३६ अनि दुष्ट स्वर्गदूत बास गरेको त्यो मानिस कसरी सद्दे भयो भनी प्रत्यक्षदर्शीहरूले तिनीहरूलाई बताइदिए। ३७ तब गेरासिनी वरपरको इलाकाका सबै मानिसहरूले उहाँलाई त्यहाँबाट गइहाल्न बिन्ती गरे, किनकि तिनीहरू असाध्यै भयभीत भएका थिए। त्यसैले उहाँ डुङ्गा चढेर त्यहाँबाट फर्किहाल्नुभयो। ३८ तब दुष्ट स्वर्गदूत बास गर्न छोडेको त्यस मानिसले आफू पनि सँगै जान पाऊँ भनी उहाँलाई बिन्ती गरेको गऱ्यै गऱ्यो। तर उहाँले यसो भन्दै उसलाई फर्काउनुभयो: ३९ “तिमी आफ्नो घर फर्क र परमेश्वरले तिम्रो लागि जे गर्नुभयो, त्यसबारे बताउन नछोड।” त्यसैले ऊ गयो र येशूले उसको लागि गर्नुभएको कुराबारे सहरभरि घोषणा गर्न थाल्यो। ४० येशू फर्केर आउनुभएपछि भीडले माया गरेर उहाँको स्वागत गऱ्यो, किनकि तिनीहरू सबै उहाँको बाटो हेरिरहेका थिए। ४१ तब हेर, याइरस नाम गरेका एक जना मानिस उहाँकहाँ आए। तिनी सभाघरको पदाधिकारी थिए अनि आफ्नो घरमा आइदिन येशूको पाउ पर्दै तिनले बिन्ती गर्न लागे। ४२ किनकि लगभग बाह्र वर्ष पुगेकी तिनकी एक मात्र छोरी मर्नै लागेकी थिई। अनि उहाँ जाँदै गर्नुहुँदा भीडले उहाँलाई घेर्न थाल्यो। ४३ तब रगत बग्ने व्यथा लागेको बाह्र वर्ष भइसकेको अनि कसैबाट उपचार पाउन नसकेकी एक जना स्त्री ४४ पछाडिबाट आएर उहाँको लुगाको किनारा छोई र तुरुन्तै उसको रगत बग्न बन्द भयो। ४५ त्यसैले येशूले सोध्नुभयो: “मलाई छुने को हो?” जब सबैले इन्कार गरे, तब पत्रुसले भने: “गुरुज्यू, भीडले तपाईंलाई घेरेर ठेलिरहेको छ।” ४६ तर येशूले भन्नुभयो: “कसैले मलाई छोयो, किनकि मबाट शक्ति बाहिर निस्केको मैले महसुस गरें।” ४७ उहाँको नजरबाट आफू लुक्न नसकेको देखेपछि त्यो स्त्री थरथर काम्दै उहाँसामु घोप्टो परी अनि आफूले उहाँलाई छुनुको कारण र त्यसो गर्दा ऊ कसरी तुरुन्तै निको भई, सबै मानिसहरूसामु बताई। ४८ तर उहाँले उसलाई भन्नुभयो: “नानी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। ढुक्क भएर जाऊ।” ४९ उहाँ बोल्दै गर्नुहुँदा सभाघरको पदाधिकारीको घरबाट एक जना मानिस आयो र भन्यो: “तपाईंकी छोरी मरिसकी! त्यसैले अब गुरुज्यूलाई बेकारमा दुःख नदिनुहोस्।” ५० यो सुनेर येशूले याइरसलाई भन्नुभयो: “चिन्ता नगर, विश्वास मात्र गर अनि ऊ बाँच्नेछे।” ५१ तिनको घरमा पुगेपछि उहाँले पत्रुस, यूहन्ना, याकूब अनि केटीका आमाबाबुबाहेक अरू कसैलाई आफूसित भित्र आउन दिनुभएन। ५२ सबै मानिस रूँदै अनि छाती पिट्दै शोक गरिरहेका थिए। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो: “रुन छोड, किनकि ऊ मरेकी छैन तर निदाइरहेकी छे।” ५३ यो सुनेर तिनीहरू उहाँको खिल्ली उडाउँदै हाँस्न थाले, किनकि केटी मरिसकेकी छे भनेर तिनीहरूलाई थाह थियो। ५४ तर उसको हात समातेर उहाँले भन्नुभयो: “नानु, उठ!” ५५ तब उसको सास* फर्क्यो र ऊ तुरुन्तै उठी। त्यसपछि उहाँले उसलाई केही खानेकुरा दिन अह्राउनुभयो। ५६ यो देखेर उसका आमाबाबुको खुसीको सीमा रहेन। तर यसबारे कसैलाई नभन्नू भनी उहाँले तिनीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो।
^ लूका ८:२८ * मत्ती ८:२९ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ लूका ८:५५ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।